Soomaaliya, 14 March 2018
Mowshinka Ka Dhanka ah Jawaari oo Fashilmay
Boosaaso oo Laga Taageeray Mamnuucista DP World
Xildhibaanno Mowshin ka Gudbiyay Jawaari
Xiisad Colaadeed oo ka Jirta Hiiraan
Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xiisad colaadeed ay ka soo cusboonaatay qeybo ka mid ah gobalkaas iyadoo degaanka xiisadda ay ka jirto laga soo sheegayo inay ka jirto xiisad.
Dhageyso Barn. Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 412aad
Ku soo dhawaada barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha. Barnaamijka waxa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali (Idaajaa). Waana qeybtii 412-aad.
Puntland: Askar Lagu Diley Weerar
Saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee Puntland ayaa ku dhintay weeraro kala duwan oo dhacay xalay iyo maanta.